Ny pigmo Themochromic dia misy micro-capsules izay manova ny loko miova. Rehefa atsangana amin'ny maripana voafaritra ny maripana, dia miova loko na tsy misy loko (na avy amin'ny loko iray mankany amin'ny loko hafa) ny pigment. Miverina amin'ny loko tany am-boalohany ny lokony rehefa milamina ny lokony.
Ny mari-pana fanodinana
Ny mari-pana fanodinana dia tokony fehezina ambanin'ny 200 ℃, ny ambony indrindra dia tsy tokony hihoatra ny 230 ℃, ny fotoana fanafana ary hampihena ny fitaovana. (Ny mari-pana avo lenta, ny hafanana maharitra dia manimba ny lokon'ny loko).
Ny pigmen thermochromic dia azo ampiasaina amin'ny karazana sehatra sy mpanelanelana rehetra toy ny loko, tanimanga, plastika, inks, seramika, lamba, taratasy, sarimihetsika sentetika, vera, loko kosmetika, poleta fantsika, lokomena, sns. ink, Screen
fampiharana fanontana, marketing, haingon-trano, tanjon'ny dokam-barotra, kilalao plastika ary lamba malefaka na izay mety ho anao.
Ho an'ny plastika: ny pigmento thermochromic dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana tsindrona plastika na vokatra extrusion toa ny PP, PU, ​​ABS, PVC, EVA, silicone, sns.
Ho an'ny firakotra: pigmento thermochromic mety amin'ny karazana vokatra firakotra ambonin'izy rehetra.
Ho an'ny inks: pigmento thermochromic mety amin'ny karazana fanontana fitaovana, ao anatin'izany ny lamba, taratasy, sarimihetsika sentetika, vera, sns.
* Mety amin'ny zavakanto voajanahary, ny fantsika na ny zavakanto fantsika artifisialy. - Maharitra: Tsy misy fofona, tia namana, mahatohitra hafanana tsara.
* Mety amin'ny famoronana loko maloto thermochromic miova loko izay miova loko amin'ny hafanana ho an'ny trano na an-dakilasy.
* Mety amin'ny fanontana lamba, fanontana lamba, ranomainty offset fiarovana.
Teo aloha: Photochromic pigment uv loko loko manova loko vovoka amin'ny tara-masoandro
Manaraka: Pigmenter fluorescent Uv ho an'ny fanontana anti-falsification
pige fluorescent uv ho an'ny anti-falsification p ...
Photochromic pigment uv pigment loko miova po ...
Uv fluorescent pigment ho an'ny anti-falsification p ...